Uncategorized – စာမျက်နှာ 56 – JobDescriptionSample.org
နေအိမ် / Uncategorized (စာမျက်နှာ 56)
Cytotechnologists Job Description / Functions များနှင့်တာဝန်ယူမှု Template ကို
Blemish, research tissues to detect proof melanoma, junk irregularities, as well as other pathological circumstances following founded requirements and practices, and mount. Career Skills Prerequisite Analyze abnormalities to be detected by cellular samples within mobile factors and patterns’ အရောင်, ပုံစံ, or measurement. Examine specimens using microscopes to evaluate example excellent. …
ရဲတပ်ဖွဲ့နှင့်ရဲအရာရှိရဲ့အကင်းလှည့်အရာရှိယောဘကိုဖျေါပွခကျြ / ဂျော့ဘ်ပြီးတော့တာဝန်ယူမှု Template ကို
ဝယ်ယူကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းရန်နှင့်အထုံးများနှင့်ရပ်ကွက်အတွင်းပြုရန်တွန်းအားပေးခြင်းဖြင့်လူနေမှုနှင့်နေအိမ်အားကာကွယ်ရန်, လူမျိုးစု, ပြည်နယ်, သို့မဟုတ်အမျိုးသားစည်းမျဉ်းများ. လာမယ့်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အများ၏ရောနှောလုပ်ဆောင်: တိကျတဲ့တည်နေရာကင်းလှည့်; မူလတန်းအသွားအလာ; အခွအေနအသွားအလာဆင့်ခေါ်; ဒဏ်ရာစုံစမ်းစစ်ဆေးရန်; မျက်နှာပြင်၏သင့်လျော်သောလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများဖမ်းဆီးသို့မဟုတ်လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှု. ယောဘသည်ကျွမ်းကျင်မှုလိုအပ်ချက်
ရေဒီယိုရောင်ခြည်အထူးကုယောဘကိုဖျေါပွခကျြ / Functions များနှင့်တာဝန်ယူမှု Template ကို
Analyze နဲ့ခွဲခြားသတ်မှတ်ရေဒီယိုသတ္တိကြွဖြစ်ကြောင်း x-rays အစိတ်အပိုင်းများကိုလျှောက်ထားပြဿနာတွေနဲ့ရောဂါနှင့်. ကုသစေခြင်းငှါ,. Job Skills Requirement Implement methodologies in regions such as for example medicines, resuscitation, ကိစ္စများ, အစွမ်းသတ္တိကိုအံဝင်ခွင်ကျ, နှင့်နာမကျန်းထိန်းချုပ်မှု. အမြိုးမြိုးသို့မဟုတ် features တွေကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းရန်မှအလေးအနက်ထားလိုအပ်ဒီယိုရောင်ခြည်ကုသမှုပညာ devices များအဆင့်ဆင့်နှင့် ပတ်သက်. ပစ္စုပ္ပန်အကြံပြုချက်များ. Participate …
စာမျက်နှာ 56 ၏ 56« ပဌမ...304050«5253545556